Thin Myat Mon - The SPACE Language Academy
Thin Myat Mon
“အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မက သင်းမြတ်မွန်ပါ။ The SPACE မှာ Zero to Hero (March 2017) အတန်း ကနေစပြီး တက်ခဲ့တာ အခု Intermediate level ရောက်ပါပြီ။ အခု ၉ လ တာ ကာလမှာ ကျွန်မရဲ့ English skills အားလုံး တကယ်ကို သိသိသာသာတိုးတက်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စကားလုံးအသစ်တွေ အများကြီး သိရပါတယ်။ အရင်ဆို အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ အရမ်းကြောက်တယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းဆီကို ဘာသာပြန်ပြီး ဖတ်တော့ တစ်လုံးချင်းဆီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မသိရင် စာကိုရှေ့ဆက်ပြီး မဖတ်ချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ The SPACE မှာလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ reading techniques တွေကြောင့် စကားလုံးတစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်မသိလည်း စာတစ်အုပ်ပြီးအောင်ဖတ်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိလာတယ်။ စာဖတ်နှုန်း သိသိသာသာမြန်လာတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ၉ လ အတွင်း သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုကိုကြည့်ပြီး The SPACE က ပြောတဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှု ရှိလာပါတယ်။”
“Hello, everyone. I am Thin Myat Mon. I’ve been joining the SPACE Language Academy since March 2017. I started from Zero-Hero class and now I am attending Intermediate level. My English skills have greatly improved during nine-month time, in particular, getting to know loads of new vocabulary. I used to hesitate to read in English. When I read in English before joining here, I used to look up every word I don’t know, which held me back in reading. But now, I have become confident enough to read the whole book in English because of the reading techniques I learnt at the SPACE Language Academy. I feel more familiar with English in my workplace too. As I can see my own improvement during9months, I believe more in what the SPACE guarantees to help us become proficient in English in2years.”